Ibhola yeGalufa yesiqhelo, Iibhola zeGalufa eziBanzi, Iibhola zeGalufa eziQhelekileyo- ISantya
AMANQANABA AMABILI Ibhola
Isantya seHangzhou Sports Sports Goods Co., Ltd.iseMlanjeni waseFuchun, yinkampani yeZhejiang Feihong yeQela lezoNxibelelwano. Yasekwa ngonyaka ka-2018, inkampani igubungela indawo engaphezulu kwe-8000 yeemitha zesikwere kwaye iqeshe abantu abangama-60. Inkampani yazisa ngemveliso yegalufa yamazwe aphesheya.
Ixesha eliqhelekileyo lase-China nge-22 ka-Disemba 2012 ibingunyaka obalulekileyo ku-Lee Westwood, owavula lo nyaka ngesihloko sakhe sama-25 saseYurophu e-Abu Dhabi wagqiba owoku-1. Yayingumdlali oneminyaka engama-47 ubudala waseBritani wonyaka okwesihlandlo sesine kwikhondo lakhe lomsebenzi, enyuka ukusuka kwiminyaka yama-59 ukuya kowama-36 kuluhlu lwehlabathi. Ibiyi ...
Inkampani yethu yeyenkampani encedisayo yeZhejiang Feihong Group Co., Ltd., iNkampani yeQela yafudukela kwisitalato iLushan ngo-2019, inkampani iyonke igubungela indawo ephantse yalikhulu elinamashumi amahlanu eehektare. Emva kokufuduswa kwenkampani yethu, inkampani yethu yesebe yandisa imveliso, UKUTHENGA ...
Ixesha eliqhelekileyo lase China, u-Ashley Gilliam waseManchester, eTennessee, ngumfundi weYunivesithi yaseMississippi ye-5-intshi IGolfer yeKholeji eGqwesileyo, u-Ashley Gilliam wayelilungu leqela lesithathu leGalufa, iqela le-Wgca All-American, iqela lokuqala le-SEC, iqela le-Sec All-Freshman, i-SEC Fir ...
Idilesi: Ukwakha ilali eyi-2 yeXiejiaxi, Isithili esiseLushan, Isithili saseFuyang, isiXeko saseHnagzhou, kwiPhondo laseZhejiang, China